သူကြီး သို့ အစာကြေဆေး တောင်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » သူကြီး သို့ အစာကြေဆေး တောင်းခြင်း
သူကြီး သို့ အစာကြေဆေး တောင်းခြင်း
Posted by မောင် ပေ on Aug 4, 2011 in Letter to The Editor, Myanmar Gazette | 52 comments
ဂေဇက် မှာ မန်ဘာ အသစ်တွေ တိုးလာပါတယ်
ပထမ ဆုံး ပြောချင်တာ က
ဒီဆိုက် မှာ စာရေးရင် ပိုက်ဆံ ပေးတယ် ဆိုတဲ့ ဟာပါပဲ ၊ ၁ သိန်း ပြည့်ရင် ထုတ်ပေးမယ် လို့ ကြေငြာထားပါတယ်
အခု ဒီစာ ကို ရေးနေတဲ့ သူ ဟာ အဲဒီ တစ်သိန်းပြည့်အောင် ရေးဖူးသူ မဟုတ်ပါ ။ သို့ သော် အခု ဖတ်နေတဲ့ စာကို ရေးနေသူ ကျွန်တော် ဟာ
အရင် က ဘယ်ဆိုက်မှာ မှ စာမရေးခဲ့ဖူးပါ ။ ယခု ဖတ်နေတဲ့ ဂေဇက် ကို စတွေ့ ပြီး မှ ၊ အွန်လိုင်း တွင် စာစရေးဖူးခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
ပထဦးစွာ ပြောချင်တာ က တော့
ဒီဆိုက် မှာ ရှိနေပြီးသား သူတွေ ဟာ အသက် ၄၀ ကျော် ၅၀ ကျော် တွေ များပါတယ် ။ ဒုတိယ အများ ဆုံး က ၃၀ တန်းတွေ ပါ
ဒုတိယ အချက် ပြောချင်တာ က တော့
ဒီဆိုက် ကို နိုင်ငံပေါင်းစုံ မှ မြန်မာ များ က ဖတ်ရှု နေကြ တယ်လို့ ဆိုပေမယ့်
အဓိက ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူရဲ့ ထက်ဝက် လောက်က မြန်မာနိုင်ငံ က ဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနိုင် ငံ က လို့ ဆိုလိုက်တာ နဲ့ 
နှေးကွေးတဲ့ အင်တာနက် လိုင်း ကို အရင်ဆုံး သတိပြု မိကြမှာပါ
အခု စာရေးနေတဲ့ ကျွန်တော် ဟာ စာဖတ် ရတာ အရမ်း ၀ါသနာ ကြီး ပြီး ၊ စာရေးဖို့ ကြိုးစားနေသူ တစ်ဦးပါ ။
ပြောချင်တာ က တော့
အင်တာနက် ဆိုင် ကို ရောက်လို့ ၊ ကွန်ပျူတာ ရှေ့ ကို ရောက်လို့ ၊ ဂေဇက် ကို ဘာလို့ အန်းတား ခေါက်တာလဲ ဆိုရင်
နိုင်ငံရေး သတင်းထူးသော်လည်းကောင်း ၊ ပြည်တွင်း သတင်း များ ကို သော်လည်းကောင်း
ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ရေးသားထားသော ၀တ္ထု ၊ ကဗျာ ၊ ဘာသာပြန် များ ကို သော်လည်းကောင်း ၊
ဘာသာရေး စာပေများ ကို သော်လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံ တစ်ကာ တွင် ဖြစ်ပျက်နေသော အကြောင်းအရာ များကို သော်လည်း ကောင်း
new version လုပ်ထားတဲ့ စာများ ကို သော်လည်းကောင်း (တုစုပြု)
ဖတ်ရှု လိုသဖြင့် ၀င်ရောက်တာပါ ။ အင်မတန် နှေးကွေးတဲ့ ကွန်နက်ရှင် ကို သောက်ဂရု မစိုက်ပဲ ။ကုန်ကြမယ့် အင်တာနက် အသုံးပြု ခ ကို သောက်ဂရု မစိုက်ပဲ
ကိုယ် ဖတ်ချင်တဲ့ ပို့ စ် ( ဒီမှာတင်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တိုင်း ) ကို new tab ဖွင့် ပြီး ကျမလာ မခြင်း စောင့်ဖတ်တာပါ
ဒီတော့ ကိုယ် သုံးရတဲ့ အချိန်၊ ကိုယ်ပေး လိုက်ရတဲ့ အချိန် နဲ့ တန် တဲ့ စာတော့ ဖတ်ချင်ပါတယ် ။
ရသ သော်လည်းကောင်း ၊ သတင်း သော်လည်းကောင်း တစ်ခုခု တော့ ရချင်မိတယ် ။
အခုရက်ပိုင်း အတွင်း တွေ့ နေရတာ က
ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘူး ။ စာလေး ဆယ်ကြောင်းလောက် ကို ၊ အများသူငှာ စိတ်ဝင် စားသွားပြီး ၀င်ဖတ်ချင်အောင် မြူဆွယ် ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ ပို့ စ် တွေ ကို ပဲ
တကူးတက အချိန်အကြာကြီး ပေးပြီး ၊ စောင့်ဖတ် မိတော့ ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် စိတ်ခု တာပေါ့နော် ။
ဒီအတိုင်း သာ ဆက်မြင်နေရမယ် ဆိုရင်
ကျွန်တော် လည်း ထိုနည်းတူ လုပ်မိသွားနိုင်တယ် ။ ကျွန်တော် ဒီလို လိုက်လုပ်ရင် ကျွန်တော် ဘာဖြစ်သွားမလဲ
ကျွန်တော် သောက်ပေါ ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ။ ဒါကြောင့် မလုပ်ပါဘူး ။ စိတ်ထိန်းပါတယ် ။
အခု ဒီစာ ကို ရေးရတာ က လည်း
အများသူငှါ မြင်တွေ့ နေရတဲ့ ၊ ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် တဲ့ စာ၁၀ကြောင်းလောက် ပို့ စ်မျိုး ကို နေ့ စဉ် ရက်ဆက် တွေ့ ရပါ များလားလို့ 
စိတ်ထဲ မှာ ခါးသလိုလို ရှိလာလို့ 
နောက်ပြီး ဆိုက်ပိုင်ရှင် သူကြီး ကိုခိုင် သိစေချင်လို့ 
ကောက်ရေးမိတာပါ ။ သူ တစ်ကယ် ကို မျက်နှာလွှဲနေပြီလား ။
ဒီကနေ့ ဂေဇက် ကို အသစ်ဝင်လာတဲ့ ညီညီ ကိုကို ဦးဦး ညီမငယ် မမ ဒေါ်ဒေါ်တို့ အားလုံး ကို လေးစားပါတယ် ၊ ကိုယ်လို သူလို စာဖတ်ဝါသနာ ပါသူတွေ လို့ 
သို့ သော် ၊ အနည်းစု ဖြစ်တဲ့ အချို့ သော အသစ် ၊ အသစ် များ ရဲ့ 
လုပ်ချင်သလို လုပ်တင်နေတဲ့ ပို့ စ်များ ကို တော့
အလွန်အင်မတန် စိတ်ပျက်မိတာ အမှန်ပါပဲ
တော်ပြီလေဗျာ ၊ မသိလို့ တစ်ခါ နှစ်ခါ တင်မိတာ ကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး ။ ၃ ခါ ၊ ၄ ခါ အဆက်မပြတ် ဖြစ်လာရင်တော့ …..
စီနီယာ များ လည်း ဘာမှ ၀င်မပြောကြတော့ဘူး လား လို့ 
သူကြီး ကိုခိုင်ရေ ၊ ကိုခိုင့် အနေ နဲ့ အချိန်ပြည့် မတည်းဖြတ် ၊ မကြီးကြပ် နိုင်တာ ကို သိနားလည်ပါတယ်
ခင်ဗျား အိုင်ယာလန် ထီ ပေါက် ထားတယ် ထင်တယ်
အရှိန်အဟုန်မြင့်မား ၊ တောက်ပ လင်းလက်နေတဲ့
ကိုယ့် ဆိုက် ကို တော့
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ပြန်လည် တင်းကြပ်ပေးပါဦး လို့ 
ဒီပို့ စ်ကနေ အများ အမြင် ကို လည်း ၊ တောင်းယူရင်း လေးစားသမှု နဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော် ။
It is good comment. Iagree and appreciate this post. I also wanted to say before like that about kinds of “nonsence or meaningless posts”. And, some posts carry only one tiny messege, but author has been writingavery very lone meaningless “background”.Next, the older posts or previous posts also appear again.Moreover, some author posted normal story or own feeling.
I am not dare to say stop these kinds of matters, it is just my own opinion.
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကိုလဲ လူဟောင်းအနည်းအကျဉ်းလောက်ကပဲ မှတ်မိတော့မှာပါ.. မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်လပြန်ရောက်ခဲ့စဉ်က ရေးသားစရာ ကုန်ကြမ်းတွေကို တွေ့ခဲ့ပေမယ့် Copy Right အကြောင်းကိုပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ ညောင်းသွားလို့လားမသိ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးချင်စိတ် ကုန်ခမ်းသွားတာ ခုထိ ဘာမှကိုမရေးဖြစ်တော့ဘူး.. ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်လဲ ဒီဆိုက်မှာပဲ စာရေးဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ဆိုက်တစ်ခုကတော့ Gmail မှာပေါ့လေ (ဒါတော့သဘောပေါက်) ခုလိုမျိုး သောင်းပြောင်းထွေလာဖြစ်နေတာကိုတော့ ဖတ်ရတဲ့သူတွေကိုလဲ အားနာသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကလဲ သူများတွေလို ပေါပေါပဲပဲ ဖြစ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် မရေးဖြစ်တော့ပါကြောင်း… နောင်များ အလျဉ်းသင့်လျင်တော့ဖြင့် ပြန်လည်ပြီး……………….
အိုက်လိုဒေါ့ လုပ်ပါနဲ့ကွယ်၊ မောင်ရှုံးရှိနေလို့ ရွာထဲမှာ ကိုယ်နိုင်မဲ့သူတယောက်တော့ ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပျော်နေတာ… အခုတော့
ရှုံး….လူရေ အကြွေးကျန်သေးတယ်နော်။ ပေးသွားပါဦး မေ့ချင်ယောင်မဆောင်နဲ့နော်။ KFC ကြက်ကြော်နည်းလေး ရေးမယ်ပြောပြီးတော့ ဒီလို မေ့ချင်ယောင်ဆောင်လို့ မရဘူး။ ဒီအကြွေးကတော့ တွေ့တိုင်း တောင်းမှာနော်။
ဒီရက်ပိုင်း တက်လာတဲဟာတွေကို တစ်ခါတစ်လေဖွင့်ကြည်ချင်စိတ်ကုန်လာတယ်
အပေါ်က တစ်ခါမှမနိုင်တဲ့လူကြီးပြောသလို…ပေါပေါပဲ ဖြစ်သွားမှာ….စိုးရိမ်မိပါတယ်
သဂျီးကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒါမျိုးတွေကို ဖိုရမ်မှာပဲ တင်ပါလို့ ပြောလိုက်တာပဲ။ အသစ်တွေအနေနဲ့ စည်းကမ်းကို မဖတ်မိပဲ လုပ်လိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သိသွားလို့ ဆက်မလုပ်ရင် ပြီးတာပေ့ါ။ ဆက်လုပ်နေရင်တော့လဲ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဆိတ်ကျောင်း၊ နွားကျောင်းဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ သဂျီးမှာ အပြည့်ပါ။
ပြည်တွင်းကမန်းလေးကိုဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုအလွန်လေးစာမိပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့၎လလေါက်ကပြည်တွင်းကိုခဏပြန်ရောက်ခဲ့တယ် အင်တာနက်ဆိုင်မှာဆိုက်တွေကိုဝင်ကြည့်မိတယ်ဗျာ တခါတခါတက်လါဘို့ စောင့်လိုက်ရတာ ကြာတော့စိတ်မရှေလို့ ပြန်ခဲ့တယ် မသွားတော့ဘူး ဘယ်ဆိုက်မဆိုကောင်းတာဆိုးတာရှိမှာပါဘဲ ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာနေတော့ကောနက်ရှင်ပြဿာနာသိပ်မရှိပါဘူး မန်းလေးကိုကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းက စာရေးယင် email ပြန်မလာတာပါ စာရိုက်လေ့ကျင့်လို့ရတယ် ကြိုက်မယ်ထင်တာလေးဝင်ဖတ်တယ် comment ရေးတယ် .။။
ဒီမှာ တနေရာတည်းမှာ ရသစုံ သုတစုံရတယ်ဆိုပြီး ၀င်ဖတ်နေတာ(အလုပ်တောင်ပျက်အောင်ပါပဲ)
သဂျီးအရင်ကလို ပိုစ့်တစ်ပုဒ်တင်ရင် ၁၀၀ပွိုင့်
မပေးနိုင်တော့ဘဲ လျှော့ချစိစစ်လာရတာ ကိုတော်ကာကြီးပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ များစွာပတ်သက်တယ်လို့
ဖတ်တဲ့လူတွေမှာလည်း တစ်ပေ့(a page)ပေါ်ဖို့အရေး မေ့လောက်အောင်စောင့်ပြီး ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပေ့ဆိုရင် စောင့်လေသမျှ အဖတ်မတင် သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပိန်ကျန်ခဲ့ပါကြောင်း
အင်း…. ကိုယ့်ဖက်ကကြည့်တော့ လက်ဖ၀ါး။ သူ.ဘက်က ကြည့်တော့ လက်ဖမိုး။ တို.လည်းသိတော့ဘူး။ ဘာပြောရမှန်း.။
ဒီရက်ထဲ သတိထားမိထားတာလေး တစ်ခုရှိတယ်
နာမည် တစ်ခုထဲကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၊၂ နှစ် လောက်က ပို့စ် အဟောင်းတွေကို ပြန်မန်းထားတယ်
Comments By Post အောက်မှာ တစ်ခုလုံး သူမန်းထားတာတွေနဲ့ ပြည့်သွားတယ်
မန်းထားတာ ကြည့်တော့လဲ ဘာမှာထူးခြားတာ မဟုတ်
“ ဟုတ်လား” “တကယ်ပေါ့” ဆိုတာမျိုးလောက်လေးနဲ့
အခုလို ရေးပြပေးတဲ့ အတွက် windtalker ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်၊ တကယ်တော့ ကျမက ၀င်တာမကြာသေးတဲ့အသစ်ပါ၊ တခြားသူတွေရေးထားတာလေးတွေဝင်ဖတ်ရင်း ၀ါသနာအလျှောက်စမ်းရေးကြည့်မိတာပါရှင်၊ ပိုက်ဆံပေးတယ်ဆိုတာလည်း မသိပါဘူးရှင်၊ အခု windtalker ရေးပြမှသိတာပါ၊ စည်းကမ်းတွေလည်း မဖတ်မိတာဝန်ခံပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလို မသိသေးတာလေးတွေ သိလိုက်ရလို့ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ windtalker ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်………….
သူကြီးကိုယ်တိုင်လဲ ဒီလိုပြောကြလွန်းလို့ဖိုရမ်ပါ ထပ်ဖွဲ့ ၊…စည်းကမ်းတွေလဲ လူမြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ထုတ်ထားပေးလျက်နှင့်..အဘယ်ကြောင့်..နားမလည်ကြလေသနည်း.
wintalker ရေ ပြောလျှင် မောတာပဲ ရှိတာမို့ … ဘာမှ မပြောပဲနေတော့မယ် ။ ဒီလိုအကြောင်းရာတွေ အရင်ကလည်း ခဏခဏ ထအော်ကြပေမဲ့ … မဖြုံတဲ့လူကလည်း မဖြုံပါဘူး … ။ ဒီအတိုင်းပါပဲ ။ ပြောတဲ့လူပဲ ငပွကြီးဖြစ်တယ်
အသစ်ဆိုလို့ တက်လာတဲ့ စာဖွင့်မိရင်ပိုဒေါ်သထွက်တယ်ဗျာ…
ကျနော်ကောမက်ရေးလိုက်မလို့ ပါဘဲ..တန်ဘိုးမရှိတဲ့ စာတွေနဲ့ …
မေလ်းထဲ ကလူတိုင်းဖတ်ပြီးသားစာတွေဗျာ…ဆိုပါစို့ မှော်ဆရာတို့ အလင်းစေတမာန်ကစာတွေ
တဘက်ကကြည့်တော့လည်း…သူကြိးအနေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်ရတာလေ…
ကျနော်ကူးသွားတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုကိုကောမက်ရေးချင်လို့ (ယနေ့ လူငယ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းအကြောင်း)
Creditမပေးရသေးဘဲ ကျနော်မကူးချင်လို့ ..၀င်ရင်းရောက်လာတာပါ…
တကယ်တော့ဒါဟာလည်း….ဘလော့ဂါတင်သူ က ကျင့်ဝတ်ကိုမသိတာလား၊
၀ယ်တဲ့ပိုစ့်လေ…..အံမယ်ဗျာရွှေအမြန်မာဥယာဉ်ဆိုဒ်မှာညနေပိုင်းကျနော်က
မေလ်းစစ်နေတော့…ထက်ဦးဝေ အက်ဒမင်(အဲ့ ဒိဆိုဒ်ကပဲ)ကခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီးခပ်တည်တည်တင်ထားတယ်…
အရှက်မရှိတဲ့ အဲ့ ဒိဆိုဒ်ကစည်းကမ်းထုတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တောင်အပြစ်လုပ်ထားတယ်…
ကျနော်ကတော့..အဲ့ ဒိဆိုဒ်တွေမှာ ကလောင်အမည်မွန်ပျိုချောဆိုတော့…
ကျနော်ခံရတိုင်(စာပေနဲ့ ပါတ်သတ်လို ပေါ့) windtalker ကိုဘော်ဒီဂါတ်တောင်ဌားချင်လာပြီဗျာ
ကွန်မန်းတွေ ဖတ်ရတာ လောကကြီးက တော်တော် ရီစရာ ကောင်းတာပဲ.. ဘယ်အရာမှ လွယ်လွယ် မရတာ အမှန်ပဲ.. အချိန်တွေ ဦးနှောက်တွေ ရင်းနှီးပြီးရေးထားသမျှ ဒီလို လွယ်လွယ် ကူးပြီး ဟိုလှည့်ဒီလှည့် လုပ်နေရင် လောကကြီးက ဘယ်တရားမလဲ.. ကာယကံ ရှင် မဟုတ်ပဲ ကွန်မန်း ဖတ်တာနဲ့ တင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ စာရေးသူ အချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အခုတော့ အရာရာကို စိတ်ကုန်လို့ ဘာမှ မရေးချင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆူး လည်း ပိုစ်မတင်တာ တော်တော် ကြာနေပြီ။ နောက်လည်း တင်ဖြစ်ဖို့တော့ သိပ်မလွယ်ဘူး။
အက်ဒမင်ခိုးတာ လူသိသွားလို့ … ရှက်ရမ်းရမ်းတာဖြစ်မယ် …. ။
ရွှေအိမ်စည်ရေ အဲ့ဒီပို့စ် နာမည်လေး ပြောလို့ရရင် ပြောပေးပါလား ဖတ်ချင်လို့ပါ။
ကျနော် MG ၇ွာသားတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ်. ရွာထဲကိုအမြဲဝင်ဖတ်နေတာ တော်တော်ကိုကြာခဲပါပြီ။ သုတ ရသ နိုင်ငံရေး အစုံကို အမြင် အမျိုးမျိးနဲ. ဆွေးနွးေ၇းသားကြတော. ကျနော် သဘာကျတယ်ဗျာ..နောက်တစ်ခု သတိထားမိတာက ရွာထဲမှာ စည်းကမ်းရှိကြတယ်။ စည်းကမ်းမရှိတဲ.သူ လာရင်လဲ စီနီယာ မန်ဘာတွေက ကွန်မန်.နဲ. ၀ိုင်းထိန်းကြတော. နောက်ဆိုစည်းကမ်း၇ှိသွားကြပေါ.ဗျာ။ MG ကို တစ်ကယ်တန်းဖို.ရှိတဲ. ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ရွာသူ ရွာသား အားလုံးမှာ တာဝန်၇ှိပါတယ်။ ကိုခိုင်..ကိုကြောင်..ကိုအောင်ပု..ကိုပေါက်ကြီးနဲ. မဆူးတို.လို ရွာသူတွေလဲ အသစ်တွေကို ကြိုဆို တွဲခေါ်၇င်း MG ကိုမြှင်.တင်ပေးကြပါ။
…ကိုခိုင်..ကိုကြောင်..ကိုအောင်ပု..ကိုပေါက်ကြီးနဲ. မဆူးတို.လို ရွာသူတွေလဲ…
လို့ပြောလိုက်တော့ အားလုံးတန်းတူ၊ ရွာသူတွေချည်းပဲ ဖြစ်ကုန်ပါလားကွဲ့
ဆူး တော့ အတော် မော နေပြီ.. ဘယ်သူကို မှ ဘာမှ ၀င်မပြောချင်တော့ဘူး။
တော်တော် စိတ်ကုန်နေပြီ။ အားလုံး ပျော်ပျော် ရွင်ရွင်နဲ့ ရှေ့သာ ဆက်သွားကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာမည် တပ်ပြီး တွဲခေါ်ဖို့ ရေးခံရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ဆူး လည်း နောက်ပိုင်း မျှော်မှန်း သလောက် လုပ်ပေးနိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး။
ခုနောက်ပိုင်း တက်တဲ့ဟာတွေအတွက် စာမရေး၊ ကွန့်မတ်မပေး ဆိုင်းအင်မ၀င်တဲ့သူတွေဆီကလည်း သတင်းတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ မန်းဂေဇက်ရဲ့ဆိုက်က အရင်တုန်း သတင်းထူး သတင်းဦးတွေ တင်သလို ထူးဆန်းထွေလာတွေတင်ကြပါတယ်။ နောက် အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံပြီး ကိုယ်သိတာလေးတွေ ဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာ ခုနောက်ပိုင်း ကောမန့်က အစပေါ့လေ.. ဟုတ်ကဲ အင်းဆိုတာနဲ့ ကော့မန့်တစ်ခုဖြစ်သွားလောက်တဲ့ဟာတွေလည်း မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဘာတွေတင်မှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့ ဆိုင်းအင်မ၀င်ပဲ အားပေးတဲ့စာဖတ်သူတွေလည်း ပြောလာကုန်ကြပါပီ။ တချို့ကျတော့လည်း အတွေ့အကြုံထက် လုပ်ဇာတ်လေးတွေလုပ်ရေးတာတွေလည်း မြင်တွေ့နေရတော့ တစ်နေ့လာလည်း သိပ်မထူးခြားတော့သလိုဖြစ်လာနေပါပြီ။ စာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်လို့ တစ်လက်စထဲ ပြောလိုက်ပါရစေနော်… အသစ်အသစ်တွေလည်း ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုသလို အဟောင်းအဟောင်းတွေကလည်း ဆက်လက်တွေ့ကြုံရတာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးပါဦး လို့ ပြောပါရစေနော်…..
ဟုတ်တယ်အိတုန်…အဲ့ ဒိဆိုဒ်…မှာသူပေခ်ျ့မှာကိုတင်ခဲ့ တယ်…
ကျနော်ကကလောင်ခွဲ များတယ်လေ..(နာမည်ကြီး)လို့ မဟုတ်ပါဘူး…
နိုင်ဆိုဒ်တိုင်း တွေ မှာ ကလောင်အမည်ရင်းဝင်တာရှားပါတယ်..
( ဘာဖြစ်တာမှတ်လို့ …တလောကတောင်ချစ်စရာလေးဆိုပြီး…လေယျာဉ်မယ်လေးလိုပြောင်းလိုက် )
ချစ်စရာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ (ဒါဘဲနော် ချစ်ရမယ်) ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာလား?
စည်းကမ်းကို နကိုက အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာ..မသိမှာ.. သတိမထားမိမှာစိုးလို့..မြန်မာလိုပြန်ရေးထားပါတယ်..။
ဖျက်ရင်.. ၀က်ဆိုက်.. ပရိုဂရမ်စံနစ်အရ.. ပွိုင့်၂၀ ပြန်နှုတ်သွားတာမို့ .. အဲဒါမျိုးတွေ… မရေးကြဖို့သတိထားပါလို့.. ပြောချင်တာပါပဲ..။
ပို့တွေမှာ.. မင်္ဂလာပါ ..သာကြောင်းမာကြောင်း.. လုပ်ထားလို့.. ခုနတင်တခုဖျက်လိုက်ပါတယ်..။
အဲ..ရွာသားတွေသတိပေးချင်တာခုက.. စံနစ်ပုံစံအရ.. ပို့စ်ကိုဖျက်ရင်..သူ့အောက်က ကော်မန့်တွေပါ..ပါသွားတာမို့.. ကော်မန့်ဖျက်သလိုဖြစ်ပြီး.. ပွိုင့်၂၀ နှုတ်ခံရတာပါပဲ..။ ကြက်သွန်နဲ့ထဲ့ထောင်းခံရတဲ့..ငရုပ်သီး..ဖြစ်သွားတာပါ..။
အဓိပ္ပါယ်မရှိ.. စာဖတ်သူအတွက်မကျန်စေတဲ့..ပို့စ်တွေမှာ.. မန်းတာ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့..နော…။
နောက်ဆို မန်းတာတောင် သတိထားရတော့မယ်
မဟုတ်ရင် ကြက်သွန်ထဲ ထဲ့ထောင်းခံရတဲ့..ငရုပ်သီး..ဖြစ်သွားဦးမယ်
ဒါဆို ဟို “ မင်္ဂလာပါ ” ဆိုတဲ့
ပို့ စ်မှာ ဝင်မန်း မိသူ
ကျွန်တော် မျိုးကြီး လည်း
သေပြီ စန်းစန်းညွန့် 
“မင်္ဂလာပါ”မှာ မင်္ဂလာလိုက်တာ လာထား၇ပွိုင့်ဆိုပြီး ရှောသွားတာက ၂၀ပွိုင့်
ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကို ပြောပြီးတာ ကြာပ..။ သူကြီးသို့ပေးစာ ဆိုပြီးတော့လေ..။
ဒိလိုပိုစ်တွေ မြင်ရတာလည်း စိတ်ကုန်တယ်..။ စိတ်လေ..တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ကို လိမ်ညာနေတယ်လို့ တောင်ထင်တယ်။ ဘာလဲ.. ကျော်ဟိန်းသတင်း တို့ ဘာတို့လိုပိုစ်တွေ ကျော်ဟိန်း သတင်းဆိုလို့ ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျော်ဟိန်း သတင်းမကြားတာကြာလို့တဲ့ သိရင်ေ၇းပေးကြပါဦးတဲ့..။
ဒါမျိုး ပိုစ်တွေကို လူညာတွေရဲ့ပိုစ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ နာမည်တတ်မှာပဲ….။ ၀င်ဖတ်တဲ့လူအရူးကိုဖြစ်နေရော…။
ဖတ်ရင်း စာရေးခြင်စိတ်ပေါက်လို့ ၀င်ရေးမိပါတယ်
သေခြာစွာ ၀န်ခံခြင်တာကတော့ ဘယ်တော့မှပြည့်လာမလဲမသိတဲ့ ငွေတစ်သိန်းကို
ကျွန်တော်က တပည့်တူဆရာမို့ အ ပါတယ်
လိုအပ်မှု့တွေကို ပြစ်ပြစ်ခါခါ ဝေဖန်ပေးကြပါလို့
ကျမ MG ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ကထဲက ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာဖတ်သူပါ..
ဒီ site မှာ Log In လုပ်ပြီး စာ စရေးဖြစ်တာတော့ ၇လပိုင်း ၂၃ရက်နေ့ကမှမို့ member ဖြစ်တာ ၁၂ ရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်..ကျမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ်သိတဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ မျှဝေချင်တာပါပဲ..ဒီနေ့ ဒီစာကို ဖတ်ရတော့ စာကောင်းဖတ်ချင်သူတွေ အတွက်ရော၊ စာကောင်းပေကောင်းရေးချင်သူတွေပါ (ခုလိုမျိုး သောင်းပြောင်းထွေလာဖြစ်နေတာကိုတော့ ဖတ်ရတဲ့သူတွေကိုလဲ အားနာသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကလဲ သူများတွေလို ပေါပေါပဲပဲ ဖြစ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် မရေးဖြစ်တော့ပါကြောင်း…) မရေးကြတော့တဲ့ အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နစ်နာလှပါတယ်…..တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…
Dear old villagers,
Please, be patient & be tolerant,
unless these new authors deliberately (intentionally) make those mistakes repeatedly.
First pace is really painful & difficult.
– ဘယ်တော့မှပြည့်လာမလဲမသိတဲ့ ငွေတစ်သိန်းကိုမျှော်ရေးနေမိခြင်းမဟုတ်ပါ။
– ဖတ်ရင်း စာရေးခြင်စိတ်ပေါက်လို့ ၀င်ရေးမိပါတယ်
– ဖတ်ရတဲ့သူတွေကိုလဲ အားနာသလို မရေးကြတော့ရင်လဲ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နစ်နာလှပါတယ်
အခုတလော မအားတာနဲ့ ရွာထဲကို ၀င်ချိန်သိပ်မရဘူး …
အရင်တုန်းက မ၀င်ရမနေနိုင်အောင် စွဲဆောင်မှုရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတလောတော့ မ၀င်ရလဲ ဘယ်လိုမှမနေတော့ဘူး …
MG က စွဲဆောင်မှုအားနည်းလာတာ အမှန်ပဲ ….
နှုတ်လိုနှုတ် ရိတ်လိုရိတ် ပွိုင့်ကိုတိုးသွားလား လျော့သွားလား စိတ်ကိုမဝင်စားတာ ပိုက်ဆံလိုချင်သဖြင့် ပိုစ့်တွေတင်ကြတယ်လို့ ပြောတော့ မခံချင်ကြဘူး ခဏခဏလဲပြောခံရတယ် တကယ်ရေးရတဲ့လူတွေကတော့ နာစရာပေါ့ အဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေလဲ အဲ့လို့ပိုစ့်တွေအောက်မှာကို လိုက်မန်းခဲ့တာ နောက်လူလာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဆိုတော့ ကျနော်မန်းနေတာတွေတောင် ထပ်ထပ်သွားနိုင်တယ် ဆြာတော်ကာဆီမှာ လာမန်းထားတဲ့သူတွေ များတာတွေ့ ရတော့ တော်တော်ဆင်ခြင်မိကြပီထင်ပါရဲ့ 
ဟုတ်တယ် အဲ့လို ခဏခဏပြောခံရတာ နားကြားပြင်းကတ်တယ် .. ပို့စ်တင်နေတဲ့လူတွေ တိုင်း ဒီလိုချည်းမှတ်နေတယ် … ။ သဂျီးရေ… .တပို့စ်ကို တပွိုင့်သာ ထားလိုက်.. ဒါဆို ရွာသရဲခြောက်သွားမယ် အဟဲ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်လေးတွေကိုတော့ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်…၀င်ပြီး ဖတ်ယုံပဲဖတ်…Post မတင်နဲ့..တင်တာနဲ့ ဆော်မယ်ဆို၇င်တော့။
လာပြန်ပီ ဘာတွေပြောနေတာလဲ ၀င်ပြီး ဖတ်ယုံပဲဖတ်…Post မတင်နဲ့..တင်တာနဲ့ ဆော်မယ်လို့ ဘယ်ကောင်ပြောခဲ့လို့လဲ
သေချာပြန်ဖတ်အုံး ရှေ့ကထမင်းထုပ်ပဲမြင်ပီး နောက်ကဝါးရင်းတုတ်မမြင်တဲ့ လူတွေကိုပြောနေတာ အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတာ အသစ်တွေမှ မဟုတ်ဘူးကွ
ချာချာ ရေ.. ရော့ သံခမောက်.. အမ အတွက် အသုံးမလိုတော့ဘူး ထင်လို့ အပိုင်ပေးလိုက်မယ်။ အဲဒါလေး ဆောင်းထားရင် တောယုံ လောက်က အသေး အဖွဲလေးပဲ..
နာလဲ ၇ ပွိုင့် အချောင်ရမလားဆို ၀င်ပွားလိုက်တာ..
(တချို့ကျတော့လည်း အတွေ့အကြုံထက် လုပ်ဇာတ်လေးတွေလုပ်ရေးတာတွေလည်း မြင်တွေ့နေရတော့)
လုပ်ဇာတ်လုပ်မရေးဘဲ ဒဲ့ရေးရင် ကာယကံရှင်လဲနစ်နာတယ်
မြင်တဲ့အတိုင်း ဒဲ့ရေးရင် ဘယ်အနုပညာမြောက်ပါ့မလဲ။
ဒီရွာမှာ အမှတ်ပေးတော့ ဒီကိစ္စအမြဲလိုလိုပြောနေကြတယ်။
အကောင်းဆုံးက အမှတ်ပေးလို့ရေးနေတယ်လို့ထင်တာလေးကို မေ့ထားလိုက်ကြပါတော့။
ဖြစ်သင့်တာကတော့ အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိသော(နှစ်သက်တာ မနှစ်သက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်)
သူများရေးထားတာကို ဖော်ဝပ်မေးအကြောင်းပြပြီး ကူးမချဘို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။)
ကိုယ်တိုင်စာရေးတယ်လို့ အမည်ခံမှတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးတာသာတင်သင့်ပါတယ်။
အနှစ်သာရလဲပါမယ်ဆိုရင် တိုတယ် ရှည်တယ်ဆိုတာလေးတွေ လဲချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ရေးသူမှာလဲ အချိန် ငွေကြေး အတွေးတွေပေး၇သလို
ဖတ်သူမှာလဲ အချိန် ငွေကြေးနဲ့ မျက်လုံးကိုပေးရတော့ အားလုံး ကောင်းအောင်
အဲဒိကိစ္စ ကို သူကြီးကို ဖိုရမ်မှာ ပြောဖူးတယ်လေ……… တင်လာတဲ့ တက်လာတဲ့ ပို့စ်တွေကို Like / dislike ပေးလို့ရတဲ့ ခလုပ်လေးတပ်ပေးပါလို့ ……… Dislike ဘယ်လောက်ဆိုရင် အဲဒိပို့ ဖြုတ်ပေါ့…….. အဲဒါ အများသဘောနဲ့ပဲလေ…။ ကြိုက်ရင်ရေး မကြိုက်ရင်မရေးနဲ့ပေါ့……..။ သူကြီးလည်း လူမုန်းမခံရတော့ဘူးပေါ့…..။ နို့မို့ဆို သူကြီး တစ်ယောက်ထဲသဘောနဲ့လုပ်တာ ဘာညာ ဖြစ်နေဦးမယ်..။ နော့…………
အကြံကတော. ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ.လည်း လေးပေါက်ပြောသလိုပဲ ဖြစ်သင်.ပါတယ်
ကျနော်တို.လည်း စာကောင်းကောင်း မရေးတတ်သေးတော.
ဖြစ်သလိုပဲ ရေးနေတာ ၀ိုင်းပြီး အပြောခံရမှာလည်း ကြောက်နေရတယ်ဗျ
သူကြီးက တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ရွာထဲမှာသန့် သန့် လေးတွေဘဲကျန်တော့မှာ။ကောင်းပါတယ်။စာကောင်းပေကောင်းလေးတွေဘဲဖတ်ချင်တာပါ။တခါတလေ မလဲ ခံစားချက်လေးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ဖြစ်ရပ်မှန်လေး တွေရဲ့ စကားနာထိုးကြတာတွေ မကြားရမမြင်ရမှာ စိတ်တော့ပူသား။အခြေအမြစ်ရှိတဲ့သတင်းတွေမှာ နောက်က အဖျက်အမှောင့်ရှိလေတော့ သူကြီးရေ ခြင့်ချိန်ပြီး ဖျက်ပေးဖို့ တောငိးဆိုပါရစေ။
ကျနော်ကတော့ ဘယ်ဟာက ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ရေးကြတယ် ဆိုတာတွေ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး
မတရား မှုလေးတွေကို ပဲ ရေးချင်မိပီး အားလုံးသိအောင်တင်ပြပေးနေချင်တဲ့ စာမရေးတတ်တဲ့
စာရေးသူ မပန်းနု ပါ ။
ပိုစ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီလို အချိန်ကုန်ပြီး ဖတ်စရာမရှိမဖြစ်ရအောင် အကြံပေးချင်တာက –
MG ဖွင့်ရင် PAGE သုံးခုလောက် MG ကိုတပြိုက်နက်ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ တစ်ခု တက်ဖို့ စောင့်နေတုန်း တစ်ခုဖတ်တယ်။ တစ်ခုဖတ်နေတုန်း နောက် ပိုစ်တစ်ခုကို ကြို ကလစ်ခေါက်ထားတယ်။
ပိုက်ဆံကိစ္စပါကတည်းက ပြဿနာ များတာပါပဲ။ နောက်တစ်ကြိမ်ခြောက်လလောက်ပျောက်ချင်လာပြီ။
တင်တိုင်းပိုက်ဆံမပေးပဲအက်မင်ကြိုက်မှ အများအတွက်အကျိုးရှိမှ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ တစ်ခါလာလည်းပွိုင့် တစ်ခါလာလည်း ပွိုင့် နဲ့တကယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံကလည်း မဖြစ်စလောက်မို့ ပြဿနာဖြစ်ရတာနဲ့ မတန်ပါကြောင်း၊ ကျွန်တော် ပြောတာအမှားပါခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးရန် မလိုပါကြောင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ဆဲလိုကဆဲနိုင်ကြောင်း၊ ဂေဇတ်စတင် ကတည်းက ရေးလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော် ဝင်မန့်လိုက်ရပါကြောင်း……………။
အနော်ကတော့ ဒီရက်ပိုင်းသိပ်မအားတာနဲ့ မ၀င်ဖြစ်တာကြာပြီ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် တခါတခါမအားတဲ့ ကြားက၀င်ဖတ်ရတာ့ စာကောင်းလေးတွေတော့ ဖတ်ချင်တယ် သူကြီးက နည်းနည်းပါးပါး ဒီထက်ပို ကြီးကြပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်…သူပြောတာကို အနော်လည်းသဘောတူတယ်…